musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » UK Kuputsa Nhau » COVID-19 Spike Inotyisidzira UK Yemumba Kufamba Kudzoka
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kumhanyisa Mota • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • Rail Kufamba • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • UK Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Nezvirambidzo zvinoramba zvichichinja pakufamba kwenyika dzese, mazororo epamba anoita kunge bheji rakachengeteka munguva pfupi.
Mazororo epamba akagadzirirwa kuve anozivikanwa muUK mumwedzi gumi nemiviri iri kuuya.
Spike hombe muzviitiko muUK ingadzikise kuvimba kwevamwe vafambi.
Mabhizimusi ekufamba achigadzirira zhizha rakabatikana anogona kuwana mafungu ekuregererwa kana kunonoka.
Kunyangwe yekugara kudiwa mune iyo UK kuva nesimba, kukwira kwehutachiona hweCOVID-19 uye chinodiwa chekuzviparadzanisa kana 'wakanamirwa' zvinogona kukanganisa zvirongwa zvezhizha, uye vashanyi vekushanya vanogona kupotsa mari inodiwa kwazvo muzhizha rino.
COVID-19 kesi spike inogona kukanganisa UK yekufambisa yekufambisa kudzoka muzhizha rino
Sekureva kwesarudzo ichangobva kuitwa, mazororo epamba akarongerwa kuve anonyanya kufarirwa mumwedzi gumi nemiviri iri kuuya, ne12% yevakapindura vekuUK vachisarudza rwendo rwuno, zvishoma kuderera pane makumi matatu kubva muzana evapinduri vepasirese vanoda kufamba mudzimba. Nezvirambidzo zvinoramba zvichichinja pakufamba kwenyika dzese, mazororo epamba anoita kunge bheji rakachengeteka munguva pfupi.
Kunyangwe paine kudiwa kwakanyanya, hoko hombe muzviitiko mhiri kwe UK zvinogona kudzikisira ruvimbo rwevamwe vafambi. Nezviitiko zvinokwira, vafambi vanowanzoita nzira yekuchenjerera pakufamba kwezhizha. Mabhizimusi ekufamba achigadzirira zhizha rakazara
Iyo 'pingdemic' yakarova zvakanyanya kuUK, nevanhu 618,903 vachigamuchira chiziviso chekuzviparadzanisa pakati peJuly 8 na 14. Uku ndiko kukwidzwa kwe17% kubva svondo rapfuura.
Iine rekodhi nhamba yakapetwa, kufamba kunogona kusangana nekukanganiswa zhizha rino. Nguva yekuzviparadzanisa iri pamakadhi evaya vakapinkirwa, uye kungotemerwa kunzvimbo yekugara wega kunokanganisa kushomeka kwezororo. Vakapinhwa vanhu vane padyo kubhuka vangangodzima sezvo vasingachakwanise kufamba. Nemakesi ari kuwedzera nekuda kwekuparadzaniswa kwakanyanya kweDelta uye zvakawanda zvichirairwa kuti zviparadzanise, mafambiro anotaridzika akagadzirirwa mwaka wakaipa. Kunyangwe zvirambidzo zvichidzikisira uye tariro yekumutsidzira yezhizha iri yakakwira, iyo 'pingdemic' ine mukana wekutadzisa mafambiro uye kutadzisa iyo UK kudzoka mudzimba.
Kusimbisa kubhuka vashandisi vazhinji vakaunza zvido zvekudzorera zvine mutsindo uye vanogona kunge vari kutarisana netarisiro yekudzorera vafambi kana makesi akwira, uye kubhuka kwekufambisa kukanganiswa.
Anokwezva ekudzosera marongero akaendesa kuwedzera kutengesa kwevakawanda vashandisi, zvisinei, kukwira kwe COVID-19 kesi kunogona kutanga kukanganisa mari yemushandi. Kuyerera kwemari kunogona kuomesa kune vanoshanda vanokanganiswa nehuwandu hwekukanzura, mari inogona kudonha, uye kunetsekana kwemari kunogona kuenderera.
Nyamavhuvhu 6, 2021 pa19: 42
Italy iri muchikepe chimwe chete!